ठूलमायाले भोट हाल्न पाइनन्
Fri, Jun 22, 2018 | 07:12:43 NST
13:42 PM ( 1 year ago )
ऋग्वेद शर्मा/उज्यालो ।
काठमाडौं, वैशाख ३१ – सबैले ठूलमाया भन्छन्, चौरासीको भोज ख्वाएकै ६ वर्ष भयो । जम्माजम्मी उहाँको परिचय यति मात्रै । २० मिनेट उकालो चढेर मतदान केन्द्र जाँदै गर्दा उहाँको पहिरनसँगै अनुहार उज्यालीएको थियो तर त्यो उज्यालो धेरेबेर टिक्न पाएन ।
‘छिमेकी नातिहरुले भोट हाल्न बोलाएको, म त बिहानै आएँ’ काठमाडौं टोखा नगरपालिका धापासी स्काई लार्क स्कूलमा रहेको मतदान केन्द्रमा पुग्नेबित्तिकै उहाँले भन्नुभयो । उहाँलाई देख्नेबित्तिकै मतदान केन्द्र बाहिर रहेका स्वयम सेवक उहाँको सेवामा लागिहाले । ‘आमा कार्ड ल्याउनु भएको छ ?’ प्रश्न सुनेर अकमकिँदै ठूलमायाले भन्नुभयो, ‘कार्ड यहीँ छ, नातिहरुले बोलाएको, खै कता हो ?’
ठूलमायाको मतदाता परिचय पत्र खोज्न ४/५ जना स्वयम सेवक लागिहाले । ठूलमाया बाहिर चौतारोमा बसेर आफ्नो बेलाको काठमाडौं सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो । ‘पहिले त यस्तो कहाँ हुनु र ? यहाँ त केही थिएन, त्यही ५ वटा जति घर थियो । अहिले त यस्तो भयो । मेरो बुढा पनि यही बसेको । कोदालो खन्थ्यो यहीँ, अहिले त छैन’ ठूलमायाले आफ्नो बेला सुनाउँदै गर्दा एकजना स्वयम सेवक आइपुगे । ठूलमायाले सोधिहाल्नुभयो, ‘बाबु कार्ड पाइयो ?’
‘तपाईंको त नाम छैन रहेछ आमा, भेटिएन । तपाईंले भोट हाल्न पाउनु हुन्न’ स्वयम सेवकको आवाज सुनेर ठूलमाया एकछिनसम्म रोकिएर बोल्नु भयो, ‘किन नपाउनु छिमेकी नातिले बोलाएर आएको, कति पटक भोट हालिसकेँ, अहिले किन नपाउनु ?’
स्वयम सेवकहरु सम्झाउन थाले, ‘तपाईंको कार्ड भेटिएन आमा, नाम लेख्दा छुटेको होला, अब मिल्दैन भोट हाल्न ।’ काभ्रे धुलिखेल पुख्र्यौली घर भएकी ठूलमाया काठमाडौं धापासीमा बस्न थालेको कति भयो ठ्याक्कै उहाँलाई पनि थाहा छैन । उहाँ धापासी बस्न थाल्दा वरपर ५/६ घरमात्र थिए, अहिले घरले भरिएका छन् । यसअघिका चुनावमा पनि यहीँबाट उहाँले भोट हाल्नुभएको हो । तर यसपटक मतदाता परिचय पत्र भेटिएन । ‘लौ अब हाल्न पाउँदैन भने म किन बस्नु ? गएँ त, नाति छोराहरुले हाल्छ मैले नै किन हाल्नुपर्यो र हैन ?’ ९० वर्षकी ठूलमायाले भोट हाल्न पाइनन् तर नाति छोराहरुले भोट हाल्न पाएकोमा खुशी हुँदै फर्कनुभयो ।